China Wholesale Sportswear Jacquard Mucheka Uye Kukanda Butt Leggings Seamless Yevakadzi Sexy Yoga Leggings Mugadziri uye Mutengesi | Wenchang
Wholesale Sportswear Jacquard Mucheka Uye Kukanda Butt Leggings Seamless Yevakadzi Sexy Yoga Leggings
Yakakwirira ruvara kukasira
Chinhu icho kwete KWC21-4079
Mashoko 88% Polyester 12% Spandex
Feature Inofema / Yakakwira Elasticity / Yakakwira Hunhu
Yakakwirira Ruvara Kutsanya
Shandisa Swimwear / Garment / Sportswear
Chitupa RSG / SGS
Kuwacha: Iyo mbatya inogadzirwa neprotein-based isina kusimba hutano-hwekuchengetedza fiber. Hazvina kukodzera kukwiza zvinhu zvine hasha uye kugeza nemuchina wekuwachisa. Idzo mbatya dzinofanirwa kunyudzwa mumvura inotonhorera kwemaminitsi mashanu kusvika gumi. Shandisa yakakosha sirika sipo yekugadzira yakaderera-furo yekuwacha poda kana kwazvakarerekera. Bvisa zvishoma nesipo, (kana iwe uchisuka machira madiki senge masheketi esiriki, shambuu inogona kushandiswa zvirinani), uye mbatya dzesilika dzine mavara dzinogona kugezwa dzakadzokororwa mumvura yakachena. zuva, uye harifanirwe kupisa neyakaomeswa. Kazhinji, inofanira kuomeswa munzvimbo inotonhorera uye ine mweya. Nekuti mwaranzi inonzi ultraviolet iri muzuva inoita nyore nyore machira esiriki yero, kupera uye zera. Naizvozvo, mushure mekusuka zvipfeko zvesilika, hazvikurudzirwe kuimonyora kubvisa mvura. Inofanirwa kuzununguswa zvinyoro, uye iyo yekumashure divi inofanira kutambanudzwa kumhepo. Rega riome kusvikira raoma 70% risati raayina kana kuzunza.
Kuayina: Iko kunopesana-kuunyana mashandiro ezvipfeko kwakaipisisa pane izvo zvemakemikari fiber, saka pane chirevo chinoti "hapana kuunyana haisi silika chaiyo". Mushure mekuwacha, hembe dzakakwinyika uye dzinoda kuayinwa kuti dzive dzakasimba, dzakanaka uye dzakanaka. Kana uchiayina, rega mbatya dziome kusvika 70% yaome, wobva wamwaya mvura zvakaenzana, mirira maminetsi 3-5 usati waayina, iyo tembiricha yekuayina inofanira kudzorwa pazasi pe150 ° C. Iyo simbi haifanire kubatwa yakananga pane iyo silika pamusoro kuti udzivise aurora.
Kuchengetedza: Chengetedza zvipfeko. Kwezvipfeko zvemukati zvakaonda, mahembe, mudhebhe, masiketi, mapijama, nezvimwewo, zvinofanirwa kugezwa nekuayinwa zvisati zvachengeterwa. Zvekupfeka kwematsutso neyechando, majaketi, Hanfu, uye cheongsam izvo zvisingaitise kutora nekuwacha, zvinofanirwa kucheneswa nekutsvaira kwakasviba kudzamara zvanyorerwa kudzivirira chakuvhu uye chipfukuto. Mushure mekuayina, inogona zvakare kutora chinzvimbo mukuita mbereko uye kudzora zvipembenene. Panguva imwecheteyo, mabhokisi uye makabati ekuchengetera mbatya anofanirwa kuchengetwa akachena uye achivharwa kusvika pazvinogona kudzivirira kusvibiswa kweguruva.
Pamusoro pekugadzirwa kwe yoga machira, isu zvakare tine mbichana mbichana, bhurugwa remumahombekombe, mbatya dzemitambo, kumhanya kupfeka, ski kupfeka, kukwira makomo kupfeka machira. Tinokumbira kubvunza isu
Kubhadhara: isu tinowanzo gamuchira T / T 30%
Apex In mupumburu chiputiriso pamwe sepombi mukati uye mapurasitiki mabhegi panze kana maererano vatengi 'chikumbiro.
LAB DIPI inotora mazuva 2-4; KUSVIRA kunotora mazuva mashanu. 10-15days yekuenzanisira kukura.
Rakajeka dhayi dhayi: 10-15 mazuva.
Dhizaini dhizaini: Mazuva 5-10.
Zvekukurumidza kurongeka, zvinogona kukurumidza, ndokumbira utumire email kuti utaure.
Nei uchitisarudza isu / FEIMEI?
Isu tinotenga shinda, tinogadzira machira ejirai uye tinofa kana kudhinda pachedu, izvo zvinoita kuti mutengo uchikwikwidze uye kukurumidza kuburitsa.
Pashure: Wholesale Sportswear Jacquard Mucheka Uye Kukanda Butt Leggings Seamless Yevakadzi Sexy Yoga Leggings
Zvadaro: Spandex Jacquard Yakarukwa Yakakwirira Inotambanudza Elasticity Inofema Mucheka WeYoga Cloth
Yoga Pants Jira
Yoga Pfeka Mucheka